> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data mgbe Draịvụ Crash
Enwere m ike Naghachi Data si A jiri Draịvụ?
Biko nyere m aka! My laptọọpụ jiri na mberede na m nwere ike agaghịkwa reboot ya. N'ihi ya, m na-ya ike mbanye si na jikọọ na ya ọzọ akwụkwọ. Nsogbu ahụ na-abịa. M nwere ike ịhụ mbanye akwụkwọ ozi na m akwụkwọ ma m nwere ike na o siri ike ịnweta m ike mbanye. Ma, anaghị m mkpa m faịlụ na na draịvụ ike. Nwere ike onye na-agwa m otú?
Ọ bụrụ na draịvụ ike gị na-kpam kpam tiwara, ọ fọrọ nke nta ekwe unu omume iji weghachite furu efu data na ya. Ihe i nwere ike ime bụ nnọọ na-agbalị iji rụkwaa ya. Dabara nke ọma, gị jiri ike mbanye ike ka a ghọtara site na kọmputa gị, chere na o yiri ka ị na-enweghị ohere iji nweta ya.
Na a ike mbanye okuku data mgbake usoro dị ka Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, ị nwere ike mfe na n'enweghị naghachi data si a jiri ike mbanye. A pụrụ iche omume na-enye gị ohere nwee ngụkọta scanning na gị jiri ike mbanye, na mgbe ahụ ị ga-enwe ike iji weghachite fọrọ nke nta nile di iche iche nke faịlụ site na ya, gụnyere videos, foto, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-amalite ike ọkwọ ụgbọala okuku data mgbake ugbu a. Biko họrọ nri version maka kọmputa gị sistemụ.
Naghachi Data mgbe Draịvụ Crash na 3 Nzọụkwụ
N'agbanyeghị na ị nwere ike ma ọ bụ na ị gaghị emeghe ya, ihe kacha mkpa bụ na gị na jiri diski ike nwere ike jikọọ na kọmputa gị na-ghọtara dị ka a ike mbanye.
Ugbu a, ka ịrụ ike mbanye okuku data mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode ka na-agbake data mgbe disk okuku
Ị ga-nyere na 3 mgbake ụdịdị mgbe launching usoro ihe omume na isetịpụrụ omume na-"Ọkọlọtọ Mode".
Ebe ọ bụ na anyị na-aga na-agbake data si dum jiri ike mbanye, ka họrọ "nkebi Iweghachite" dị ka a na-agbalị. Nke a mode-enyere gị aka hazie mgbake nke furu efu, ehichapụ, resized ọ bụ mebiri emebi nkebi.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị jiri ike mbanye
Ebe a ị dị nnọọ mkpa iji họrọ draịvụ ike gị na pịa "Ekem" ịnọgide.
Mgbe ahụ partitions na gị jiri ike mbanye niile ga-egosipụta na windo. Ị dị nnọọ mkpa họrọ nkebi na ị na-aga na-agbake data site na pịa "Malite" ka iṅomi maka furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data mgbe ike mbanye okuku selectively
Mgbe iṅomi dị n'elu, niile hụrụ ọdịnaya na gị jiri ike mbanye ga-depụtara na window. Ị nwere ike ịlele faịlụ aha ma ọ bụ preview hụrụ ihe oyiyi na-ego otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike Ewepụtara.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.